ईश्वर तपाईंसित नजिकिन चाहनुहुन्छ (यूहन्ना ६:४४)
“मलाई पठाउनुहुने बुबाले नखिचेसम्म कुनै मानिस मकहाँ आउन सक्दैन।”—यूहन्ना ६:४४.
कोही-कोही किन शङ्का गर्छन्‌? ईश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू धेरै छन्‌ तैपनि तिनीहरू उहाँबाट टाढा भएको महसुस गर्छन्‌। हरेक हप्ता चर्च धाउने आयरल्याण्डकी एक महिला क्रिस्टिना यसो भन्छिन्‌: “ईश्वर त सबै कुरा सृष्टि गर्ने व्यक्ति मात्र हो जस्तो मलाई लाग्थ्यो। मैले उहाँलाई राम्ररी चिनेकै थिइनँ। उहाँसित कहिल्यै नजिक महसुस गरिनँ।”
ईश्वरको वचन के भन्छ? हामीले एक्लो वा बेसहारा महसुस गर्दा यहोवा हामीलाई मदत गर्न छोड्नुहुन्न। ईश्वरले हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई येशूले एउटा उदाहरण चलाएर यसरी बताउनुभयो: “यदि कुनै मानिसको सय वटा भेडा छन्‌ र तीमध्ये एउटाले बाटो बिरायो भने उनान्सयलाई डाँडामै छोडेर के ऊ बाटो बिराउने त्यो एउटा भेडो खोज्न जाँदैन र?” यसबाट हामी के पाठ सिक्छौं? “त्यसैगरि, स्वर्गमा बस्नुहुने मेरो बुबा यी सानाहरूमध्ये कसैले पनि बाटो बिराएको चाहनुहुन्न।”—मत्ती १८:१२-१४.
“यी सानाहरूमध्ये” सबै जना ईश्वरको नजरमा अमूल्य छन्‌। त्यसोभए ईश्वरले ‘बाटो बिराउने एउटालाई’ कसरी खोज्नुहुन्छ? यस पृष्ठमा चित्रको माथि उल्लेख गरिएको शास्त्रपदमा बताइएजस्तै ईश्वर यहोवा मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्नुहुन्छ।
आज मानिसहरूको घर-घरमा वा सार्वजनिक ठाउँहरूमा गएर ईश्वरको विषयमा बाइबलको सन्देश कसले सुनाउँदै छन्‌?
ईश्वरले मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्न कस्ता कदमहरू चाल्नुभएको छ, विचार गरौं। प्रथम शताब्दीमा एक जना इथियोपियाली अफिसर बाइबल भविष्यवाणीको एउटा भाग पढ्दै आफ्नो रथमा यात्रा गर्दै थिए। तिनलाई गएर भेट्न र तिनले पढिरहेको भविष्यवाणीको अर्थ बुझाइदिन ईश्वरले एक जना ख्रीष्टियन फिलिपलाई पठाउनुभयो। (प्रेषित ८:२६-३९) अर्को एउटा विवरण पनि विचार गर्नुहोस्। कर्नीलियस नाम गरेका एक रोमी अफिसर निरन्तर प्रार्थना गर्थे र सही तरिकामा ईश्वरको उपासना गर्न कडा प्रयास गर्थे। ईश्वरले प्रेषित पत्रुसलाई तिनको घरमा गएर तिनलाई मदत गर्न अह्राउनुभयो। (प्रेषित १०:१-४८) साथै, ईश्वरले प्रेषित पावल र तिनका सहयोगीहरूलाई फिलिप्पी भन्ने सहरबाहिर एउटा नदीतिर पठाउनुभयो। त्यहाँ तिनीहरूले ‘ईश्वरको उपासना’ गर्ने लिडिया नाम गरेकी एक स्त्रीलाई भेटे। लिडियाले “ध्यान दिएर सुनून्‌ भनेर यहोवाले उनको मन खोलिदिनुभयो।”—प्रेषित १६:९-१५.
माथि दिइएका विवरणहरूबाट हामी के सिक्न सक्छौं? ईश्वर यहोवाको खोजी गर्ने सबै मानिसले उहाँलाई चिन्ने मौका पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। आज मानिसहरूको घर-घरमा वा सार्वजनिक ठाउँहरूमा गएर ईश्वरको विषयमा बाइबलको सन्देश कसले सुनाउँदै छन्‌? धेरै मानिसको जवाफ यस्तो छ, ‘यहोवाका साक्षीहरूले।’ आफैलाई सोध्नुहोस्, ‘यहोवाका साक्षीहरूलाई चलाउँदै ईश्वर मसित नजिकिन खोज्दै हुनुहुन्छ कि?’ ईश्वरले तपाईंसित नजिकिन कदम चाल्नुभएको छ। आफूले पनि उहाँले चाहेअनुसारै गर्न सकूँ भनेर प्रार्थना गर्न हामी तपाईंलाई आग्रह गर्छौं। *
^ अनु. 8 थप जानकारीको लागि www.jw.org/ne मा बाइबल किन पढ्नुपर्छ? भन्ने भिडियो क्लिप हेर्नुहोस्।
परमेश्वर सबै प्रार्थना सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न, हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको नजिक हुन हामी अरू के-के गर्न सक्छौं, थाह पाउनुहोस्।